Xildhibaano Ku Eedeyey Wasiirada Maaliyada iyo Lacagta ee DFKM ah in ay Lunsadeen Hanti-qaran • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xildhibaano Ku Eedeyey Wasiirada Maaliyada iyo Lacagta ee DFKM ah in ay Lunsadeen Hanti-qaran
Xildhibaano Ku Eedeyey Wasiirada Maaliyada iyo Lacagta ee DFKM ah in ay Lunsadeen Hanti-qaran
May 12, 2010 - By: Abdirahman. A
War Saxaafadeed ay soo saareen guddiga Baarlamaanka ee qaabilsan dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ayaa waxaa ay ku eedeyeen Wasiiro ka tirsan Dowladda Federaalka in ay lunsadeen hanti qaran.
Wasiirka Maaliyadda Shariif Xassan Sheikh Aadan iyo Wasiirka Lacagta Dowladda Federaalka C/raxmaan Cumar Cismaan “Injineer Yariisoow” ayaa waxaa ay ku eedeyeen in labadaas Wasiir ay falal musuq maasukh iyo isdaba marin ku sameyeen hantida qaranka Dowladda Federaalka.
Xildhibaan Caasha Axmed Cabdalla oo Horseed Media uga warantey Wasiirada takrifalka lagu eedyay[powerpress]
Xildhibaan Caasho Axmed Cabdalla oo ka tirsan guddiga Baarlamaanka ee qaabilsan Dhowrista hantida Qaranka oo Shir Jira’id ku qabatay Muqdisho ayaa sheegtay in la fasaxay Baasaboorka Soomaaliya caalamka oo dhan isticmaalkiisa isla markaana ay jiraan dad si khaldan u adeegsaday ayadoo ku eedeysay Wasiirka Lacagta uu arintaas wax ka qaban kana warqabo.
Waxaa ay sheegtay lacag badan uu soo xarowday balse aan la aqoon waxaa lagu qabtay sidaas darteed ay Beesha Caalamka ka codsatay in labadaas Wasiir laga xannibo Safarada dibadda isla markaana aan la siinin wax Fiiso ah(Visa) ilaa uu guddiga fasax siinaayo.
Ugu dambeyntii waxaa ay sheegtay in ay masuul ka noqon doonaan isdaba marinta ay sameyeen labadaas Wasiir masuuliyinta ugu sareeya Dowladda Federaalka ee Madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha maadama aysan Baarlamaanka xilligaan la xisaabtami karin,sida ay sheegtay.
Arintaan ayaa sababi karta khilaaf cusub oo ka dhex bilawda Baarlamaanka iyo Wasiirada Dowladda Federaalka,xilli uu saamayn balaaran Dowladda ku yeeshay khilaaf soo kala dhexgalay Gudoonka Baarlamaanka iyo Xildhibaanada.